“SINGAPORE INSTITUTE OF MANAGEMENT (SIMGE) မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် ပေးအပ်သည့် 100% ပညာသင်ဆုအား CROWN EDUCATION မှ မဟေသီလွင် ဆွတ်ခူးရရှိ” – Crown Education
Jun 08, 2021 Scholarships & News, Student Testimonials
Singapore Institute of Management (SIMGE) မှာ Business & Finance ဘာသာရပ်အတွက် ၁ဝဝ% ပညာသင်ဆုရရှိခဲ့တဲ့ ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးရှင် မဟေသီလွင် အနေနဲ့ ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲ….
“ညီမက ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မှာ အခြေခံပညာအထက်တန်းကို ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း (TTC) ကနေ အမှတ်ပေါင်း – ၅၄၂ မှတ် နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်… (၃) တန်းနှစ်ကတည်းက အတန်းခေါင်းဆောင် နှစ်တိုင်းလုပ်ခဲ့ သလို အလယ်တန်းရောက်တော့လဲ ကျောင်းကောင်စီ အသင်းဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျောင်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သင်္ချာအိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆုရခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်စာအတွက် British Council မှာ Mover ကနေ FCE အထိ စာမေးပွဲတွေ ဖြေခဲ့ပါတယ်ရှင့်…. စာတစ်ခုထဲ လုပ်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အိမ်ကလဲ အားကစားနဲ့ အနုပညာကို အားပေးတဲ့အတွက် ရေလဲကူးဖြစ်သလို Piano တီးတာ ၊ တယောထိုးတာ တွေလဲ အချိန်ပေးပြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်…”
Banking & Finance ဘာသာရပ်ကို နိုင်ငံခြားမှာ တက်ဖို့ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံ…
“ဖေဖေက Banker တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ငယ်ငယ်တည်းက ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားပါ… ဆယ်တန်းအောင်တော့ ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်, Centre of Excellence (COE) ကို Roll No – 1 နဲ့ဝင်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားတာက Banking & Finance ဖြစ်နေတော့ အဲဒီဘာသာရပ်ကို Master တက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ Bachelor ထဲကစပြီးလေ့လာချင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားမှာတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်…”
နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်မယ်လို့ စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါ…
“ညီမစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်ကို ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ကျောင်းတွေမှာ တက်လို့ရလဲဆိုတာ စုံစုံလင်လင် သိချင်တဲ့ အတွက် CROWN Education မှာ လာစုံစမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ CROWN က ရခဲ့တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး နိုင်ငံ နဲ့ ကျောင်းကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ…”
နိုင်ငံ နဲ့ ကျောင်းရွေးချယ်မှု…
“စင်ကာပူက မြန်မာပြည်နဲ့လည်းနီးတဲ့အပြင် မိဝေးဖဝေးမှာ တစ်ယောက်ထဲ ကျောင်းသွားတက်ရမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်လဲ အရမ်း Safe ဖြစ်တဲ့အတွက် စင်ကာပူဘဲသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Singapore Institute of Management (SIMGE) ကို ရွေးခဲ့တာကတော့… Reputation ကောင်းလို့ရယ် ၊ Banking & Finance ဘာသာလဲရှိပြီး ၁ဝဝ% ပညာသင်ဆုလည်း လျှောက်လို့ရတဲ့အတွက်ရယ် သူနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ တက္ကသိုလ် တွေကို သဘောကျလို့ရယ်ပါ…”
“ပညာသင်ဆုအတွက် လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ အထောက်အထားတွေကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ကျောင်းလျှောက်တာ နဲ့ Visa အတွက်ကိုတော့ CROWN Education ရဲ့ အကူအညီနဲ့ပဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်… ညီမကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ ကျောင်းဝင်ခွင့် နဲ့ Visa လျှောက်တဲ့နေရာမှာ စာရွက်စာတမ်း ကျန်ခဲ့တာမျိုး မှားသွားတာမျိုး ဖြစ်ရင် ကိုယ်ပဲနစ်နာမှာဆိုတော့ ကျွမ်းကျင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ CROWN Education ရဲ့ အကူအညီကို ယူခဲ့တာပါ…”
“ကိုယ်သာ ပညာသင်ဆုရမယ်ဆိုရင် မိဘအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အများကြီးသက်သာပါတယ်…နောက်တစ်ခုက ပညာသင်ဆုနဲ့ ကျောင်းတက်ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် အထိန်းအကွပ်လေးတစ်ခုဖြစ်သလို ဂုဏ်ယူစရာလဲကောင်းပါတယ်… ပညာသင်ဆုပေးတယ်ဆိုတိုင်းတော့ ကိုယ့်ဝါသနာကို မေ့လိုက်ပြီး ပညာသင်ဆုနောက်မလိုက်စေချင်ပါဘူး… ကိုယ်တကယ်ဝါသနာပါတဲ့ ဘာသာရပ်အတွက်ဘဲ ပညာသင်ဆု ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အကူအညီယူပြီး ရှာဖွေစေချင်ပါတယ်…”
အခုလို ၁ဝဝ% ပညာသင်ဆု ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့တဲ့ ညီမငယ်ကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့အတွက် CROWN Education အနေနဲ့ အလွန်ဘဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံက အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးဘာသာရပ်တွေကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ Singapore Institute of Management (SIMGE) မှာ –
Business နှင့် ဆက်စပ်ဘာသာရပ်များ
Management and Digital Innovation,
Economics နှင့် ဆက်စပ်ဘာသာရပ်များ
Supply Chain and Logistics Management, အပြင်
Psychology နှင့် International Relations
Computer Science, Network, Cyber Security ဘာသာရပ်တွေကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
SIMGEမှာ ရွေးချယ်သင်ယူနိုင်တဲ့ တက္ကသိုလ်တွေကတော့ –
ယူအက်စ်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ University at Buffalo, The State University of New York,
ယူကေထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ University of Warwick, University of Birmingham, University of Londonနဲ့
သြစတြေးလျထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ RMIT Australia, University of Wollongongရဲ့ ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်ပရိုဂရမ်တွေကို (၁ဝဝ%)ပညာသင်ဆုနဲ့ လျှောက်ထားသင်ကြားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်။
“SIMGE Singaporeတွင် လျှောက်ထားနိုင်မည့် ပညာသင်ဆုများ”
SIMGE Diploma Scholarship –
မြန်မာငွေကျပ် (၁၃၂)သိန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ SIMGE Diploma Scholarship ကို Diploma in Accounting, Diploma in Banking and Finance, Diploma in International Business, Diploma in Management Studies, Diploma in Information Technology ဘာသာရပ်တွေအတွက် လျှောက်ထားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် Aprilနဲ့October Intakeတွေမှာ ရွေးချယ်ပေးအပ်လျက်ရှိပြီး “SIMGE Diploma Scholarship” ရရှိသူတွေအနေနဲ့ စာသင်စရိတ် (၁ဝဝ%)ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
SIMGE Bachelor Degree Scholarship –
SIMGEရဲ့ Bachelor Degree Scholarshipကို အခုလက်ရှိ SIMGEမှာတက်ရောက်လျက်ရှိတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေသာမက အခုမှစတင်တက်ရောက်မယ့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေပါ လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Bachelor Degree Scholarshipကို ကျောင်းစာထူးချွန်ထက်မြက်မှုအပိုင်းသာမက Sports and Arts အပိုင်းတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။ နှစ်စဉ် March Intake (သို့) October Intake တွေအတွက် ရွေးချယ်ပေးအပ်လျက်ရှိပြီး Bachelor Degree Scholarship ရရှိသူတွေအနေနဲ့ စာသင်စရိတ်သာမက စာမေးပွဲကြေးနဲ့ အခြားသောသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေအတွက်ပါ အလုံးစုံကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
SIMGEရဲ့ ကျောင်းဝင်ခွင့်အလိုက် လျှောက်ထားနိုင်မယ့် ဘာသာရပ်တွေနဲ့ ပညာသင်ဆုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကို အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါက – CROWN Education ၏ ရုံးဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်သည့် 09 250 023 288, 09 450 200 060 သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း သတင်းစကားပါးလိုက်ပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးဘာသာရပ်သင်ကျောင်း SINGAPORE MANAGEMENT INSTITUTE (SIMGE) မှ “ရာနှုန်းပြည့် ပညာသင်ဆု” ၂၀၁၆ တွင် ရရှိခဲ့သည့် မဆုမြတ်မိုး
JAMES COOK UNIVERSITY, SINGAPORE မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော MERIT SCHOLARSHIP ရရှိသွားကြသည့်- မောင်ရဲထွဋ်အောင်(25% SCHOLARSHIP)